Iyo zano rekutora iyo iPhone 7 inotungamira mafeni maviri kujeri | IPhone nhau
Zano rekutora iyo iPhone 7 inoisa mafeni maviri mutirongo
Nhasi zvakaoma kuwana itsva iPhone 7, uye ndiyo itsva Flagship Apple iri kuwedzera zvishoma nezvishoma. Iwe uchazviwana iwe uine matambudziko kuti uzviwane muApple Chitoro pachavo, muzvitoro zvikuru zvetekinoroji, uye zviri pachena mumakambani makuru efoni. Hongu, chishandiso chakafanana chaizvo neiyo iPhone 6s, asi chokwadi ndechekuti kudiwa kuri kupfuura kufunga kwesitoko kwechigadzirwa. Iyi ndiyo zano repfungwa reApple?
Maitiro kana kwete, izvo zviri pachena ndezvekuti vanhu vazhinji vanoda kuwana iyi itsva iPhone, iwo mavara matsva uye maficha eiyo nyowani iPhone 7 (kuramba mvura, processor nyowani, nyowani bhatani repamba ...) inoita kuti ive yakakosha kune vakawanda. Uye chenjera kuyedza zvisingaenderani nzira dzekuwana iyo nyowani iPhone 7 ... shure fanboys muSingapore vakapedzisira vari mujeri ... Pano isu tinokupa iwe hwese hwakazara hweichi chakanetseka chirongwa chekutora nyowani iPhone 7, bhaisikopo chirongwa ...
Sezvatakambokuudza, zvinonetsa kuwana iyo iPhone 7, zvinonyanya kuoma kana munyika medu tisina Apple Store, uye izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu vaviri muSingapore. Izvi vaviri vakomana vaida kutora iyo nyowani iPhone 7 zvakadaro, vaiziva kuti kwaive stock muhoro yekubuda kweSingapore airportHongu, stock yaive muzvitoro mushure mekuchengetedzwa ... Vakatenga matikiti maviri endiza kuti vapinde nhandare uye nekudaro vatenge imwe yeiyo iPhone 7 inowanikwa.
Dambudziko Icho chiri pakuti zvakarambidzwa zvachose kuwana nzvimbo ino pasina chinangwa chekufambaIyi inzvimbo iri kuseri kwemuganhu inoratidzira kutonga uye hazvigoneke kuwana nzvimbo ino kudzivirira kufamba. Muchokwadi, zano iri kurangwa ne $ 735 uye kusvika kumakore maviri mutirongo... Iyo jee yaidhura. Saka mushure meizvi, mapurisa eSingapore ayambira nezvematambudziko anogona kutiunzira kupinda munzvimbo iyi yendege pasina chinangwa chekufamba. Chenjera, kwete zvese zvinoenda kunotora iyo iPhone 7 ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zano rekutora iyo iPhone 7 inoisa mafeni maviri mutirongo
Handizive kuti ndainzwisisa here, vakapinda nendege netikiti, vakatenga iPhone ndokuenda, handifunge kuti vachakuvadza munhu, pandakaverenga musoro wenyaya ndakafunga kuti vaba kana chimwe chakadai.
iCareFone, imwe nzira yeTunes, yekuchenesa chishandiso uye zvimwe zvakawanda kune yako iPhone
Yxplayer, vhidhiyo player, yemahara kwenguva shoma